के तापाई धेरै मःम खानुहुन्छ ? यस्ता रोगले ज्यानै जान सक्छ… – Fewa Times
के तापाई धेरै मःम खानुहुन्छ ? यस्ता रोगले ज्यानै जान सक्छ…
प्रकाशित मिति: April 30, 2018 1:07 pm
काठमाडौँ – मःम बनाउन मैदाको प्रयोग गरिन्छ । मैदाबाट बनेको मःम दैनिक खानु शरीरका लागि खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
हिजोआज हरेक गाउँदेखि सहरका गल्लीमा सहजै उपलब्ध हुने मम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मःम होस् वा अन्य मैदाबाट बनेको अन्य खानेकुराको साइड इफेक्ट हुन्छ । मैदा गहुँको परिस्कृत आँटा हो । यसमा फाइबर हुँदैन । मैदालाई सेतो तथा चमकदार बनाउन बेन्जोइल परअक्साइडले ब्लीच गरिएको हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकार हुन्छ ।
मःम वा मैदाबाट बनेका खानेकुरा खाँदा हुने नकारात्मक असरहरु :
यौनका बिषयमा युवतीहरुले सोच्छन यी ९ रोचक कुरा जसले तपाई आश्चर्य पर्नुहुन्छ
दशैको बेला विश्वभर चलेन युट्युब, ट्वीटर मार्फत युट्युबले भन्यो यस्तो
बडा दशैंको तेस्रो दिन : नवरात्रमा ब्रत बस्नाले सोचेको मनोकामना पुरा हुन्छ
के तपाईलाई कसैले दिनुपर्ने पैसा नदिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय जसले तपाईको पैसा भोलीपल्टै आउँछ